Dayax-madoobaad xalay siweyn looga dareemay waddamo badan oo adduunka ah Soomaaliyana ay ka mid tahay. – Radio Daljir
Juunyo 16, 2011 12:00 b 0
Garowe, June 16- Dayax-madoobaad ayaa xalay si weyn looga dareemay meelo badan oo ka mid ah bariga afrika iyo bariga dhexe iyadoo saacado dheerna la dareemayey dayax-madoobaadkaas.
Deegaannada Soomaaliya gaar ahanna Puntland ayaa ka mid ah meelaha dayax-madoobaadkaasi hareeyey iyadoo mararka qaarna ayba yaraatay aragtida muuqaalka dayaxa kaddib markii dhammaantiis oo madaw isku baddalay.
Masaajidda kala duwan ayaan habeennimadii xalay ahayd laga seexan iyadoo la tukanayey salaatul Khasuufka la oogo xilliyada dayax-madoobaadku dhacdo.
Wacdi, waano iyo wax isku sheegid xagga cabsida rabbi ah ayaa illaa xalay intii laga gaarayey soo dhawaadka waa bariga ka socday dhammaan masaajidda kala duwan iyadoo dadka looga yeerayey makarafoonnad masaajidda si ay u camiraan jameecada salaatul khusuufka.
War-baahinta gudaha ayaa iyana saacado dheer waxaa ka shidnaa qur’aanka kariimka ah iyo ducooyin alla tuug ah oo rabbi lagu waydiisanayey danbi dhaaf, waxaana waddooyin magaalooyin Puntland xalay lagu arkayey dad raxan-raxan u socda oo watay dab-qaado foox ka shidan yahay kuna dhawaaqayey erayo rabbi bari ah.